OPPO Chọta X: ọkọdọhọ nkọwa na Design leaked | Gam akporosis
Ekpughere mbụ nkọwa nke OPPO Find X
OPPO na-akwadolarị maka ịbata Spain n’ọnwa Juun a. A na-atụ anya ka ịbanye na ahịa Spanish na OPPO Find X, ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro n'onwe ya. Ngwaọrụ akpọrọ ka ọ bụrụ ọkwa ọhụrụ ya na nke edepụtara nkọwapụta izizi ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ asịrị.
Tumadi n'ihi leaked ụdịdị nke a OPPO Find X bụ n'ezie ike. Karịrị ihe ọ bụla gam akporo ọzọ anyị na-ahụ n’ahịa. Kedu ihe anyị ga-atụ anya site na ụdị ọhụụ nke ika China?
A na-atụ anya ka ihe nlereanya nke ika ndị China pụta ihe ngosi 6,42 nke anụ ọhịa ahụ. Ọ ga-enwekwa mkpebi 2K, nke ga-etinye ya na ogo nke ụdị dịka LG G7 ma ọ bụ Galaxy S9 na nke a. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịtụ anya na inwe ihu ihu 3D na ekwentị ahụ.
OPPO Find X ga-akụ nzọ jiri Snapdragon 845 dị ka ihe nhazi, nke ga-abata tinyere RAM 8 GB. Banyere nchekwa dị n'ime ya ọ ga - abụ 256 GB, ọ bụ ezie na amabeghị ma ọ bụrụ na nke a ga - abụ naanị njikọta na ekwentị ga - enwe na nke a.
Yana ndị a niile, OPPO Find X ga - enwe batrị 4.000 mAh ikike, nke na-ekwe nkwa inye nnwere onwe dị ukwuu. A na-atụ anya na ị ga-enwekwa ngwa ngwa a maara nke ọma na anyị ahụlarị na ekwentị ndị ọzọ. Banyere igwefoto amaghi otutu ugbua, obu ezie na ekwuru na o ga-enwe x5 optical zoom.
Nke a bụ ihe ekpughere banyere ngwaọrụ ruo ugbu a. Anyị nwere olile anya ịmatakwu, karịsịa ụbọchị ịhapụ na ọnụahịa, n'oge na-adịghị anya. Karịsịa ma ọ bụrụ na a OPPO Find X ga-akụ ahịa na June mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-abanye na Spain. Kedu ihe ị chere banyere ekwentị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ekpughere mbụ nkọwa nke OPPO Find X
Nnukwu ịnyịnya dijo
O yiri obere ka m, biko.
Zaghachi Nnukwu Horsnyịnya
Ihe onyonyo ohuru na nchoputa nke Motorola One Power
Akpachapụrụ nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi Mi A2 Lite